Godina Lixa Shaggar Aanota Meettaa Roobii fi Ada’aa Bargaatti olola Mootummaan Wayyaanee Maqaa Filannoo Dharaatiin Oofaa Jiruun Walqabatee FDG Jabaatee Itti Fufe. | QEERROO
Godina Lixa Shaggar Aanota Meettaa Roobii fi Ada’aa Bargaatti olola Mootummaan Wayyaanee Maqaa Filannoo Dharaatiin Oofaa Jiruun Walqabatee FDG Jabaatee Itti Fufe.
Caamsaa 22/ 2015 Meettaa Roobii
Godina Lixa Shaggar Aanota Meettaa Roobii fi Ada’aa Bargaatti olola mootummaan wayyaanee maqaa filannoo dharaatiin oofaa jiruun walqabatee FDG jabaatee itti fufe. Ummatni Oromoo aanota kanneen keessatti argaman shiraa fi daba mootummaan wayyaanee maqaa filannoo dharaan nurratti hojjachaa jiru fuuldura ni dhaabbanna jechuudhaan mootummaa gabroomfataa balaaleffachaa jiru. Mootummaan wayyaanee gabroomfataadha, mootummaa nama nyaataadhaa, mootummaa sobduudha, hattuudha, kanaaf gabrummaa baannee buluun nutti ulfaachaa jira, mootummaa nama nyaatu, mootummaa sobduu fi hattuudhaan hin bullu jechuudhaan sagalee irratti dhageessisaa jiraachuun ibsame. Mootummaan wayyaanees shira hagana hin jedhamne maqaa filannootiin dalagaa jiraachuun ifa ta’e. Kaabinootni fi Kaadirootni mootummaa wayyaanee aanota kanneen keessatti halkanii fi guyyaa manneen ummataarra naanna’uudhaan KAARDII FILANNOO HAARAA qopheessanii dirqamaan fudhachuu qabdu jechuudhaan ummata mana ofii jiraatu dararaa jiraachuun ibsameera. Kaardii haaraa yeroo ammaa kanatti dirqamaan raabsaa jiran kana buufata filannootti osoo hin taane karaa kaabinootaa fi kaadiroota mootummaan akka galchuu qabaniif dirqisiifamaa jiraachuun ifa ta’e. Sanumaa namni tokko kaardii haaraa kana hanga shaniitti fudhachuu akka qabuu fi ummatni gidirfamaa jiraachuun ibsame. Kanneen kaardii haaraa kana humnaan itti kennamee fi dabballootni mootummaa odeeffannoon kuni akka jalaa hin baaneef ummata manarra deemuun kakachiisuun waadaa galchuuf yaalanillee bakkoota garaagaraatti diddaan ummataa muudate. Mootummaa gabroofataa, nama nyaatu, mootummaa sobduu fi hattuu osoo ija keenyaan agarruu, osoo gurra keenyaan dhageenyuu akkamiin kakannee kaardii dharaa fudhanna jechuudhaan fuuldura ijjachuun dhaga’ame. Sababa kanaan walqabatee dargaggootni fi barattootni Oromoo aanota kanneen keessa jiran mana hidhaatti darbamuu fi dararamaa jiraachuunis ifa ta’e. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kanatti dargaggoota kanneen sochii ummataa duuba isintu jira, ummata nurratti qindeessaa fi leenjisaa jirtu jechuudhaan reebicha hamaa fi miidhaa qaamaa cimaa namoota hedduurraan akka gahaa jiran ifatti barameera.
Haaluma kanaan Aanaa Meettaa Roobii magaalaa Eelaatti kanneen humnoota poolisii federaalaa wayyaaneetiin reebichaan qaamaa ulfaatan irra ga’ee:
1. Dargaggoo Alamuu Baqqalaa Gurmuu
2. Barataa Taaddasaa
3. Barataa Dirriboo fi kanneen biro hafan biroo dabalatee miidhaa qaamaa cimaan kanneen irra gahedha.
Kana malees haaluma walfakkatuun , Aanaa Ada’aa Bargaatti dargaggootni Oromoo hedduun hidhaatti guuramuun dararamaa jiraachuun ibsame jira. Dargaggootni heddummina qaban qabamanii hidhamuu kan gabaase maddii keenya, ilmaan Oromoo kun gariin hidhaman yeroo amma kana eessa buuteen isaanii dhabamuun ibsame jira. Kanneen maqaan nu hin geenye akka nu qaqqabeen kan isiniif gabaasnu ta’uu ni hubachiifna.
Haaluma walfakkaatuun kaabinootni mootummaan wayyaanee torban darbe irraa eegaluudhaan dabballota isaanii sadarkaa gandaa hanga Aanaatti shira ummatarratti dalagamuuf adeemu iratti leenjii kennuun dhaga’ame. Buufatawwan filannoo naannoo keessan jirurratti KFO yoo injifate, bakka jirtanitti jeequmsa kaasuudhaan korojoon filannoo akka ibiddaan gubatu gochuu irraa duuba hin deebi’inaa, taajjabdoota irratti immoo tarkaanfii hamaan akka fudhatamuu qabuu fi sana booda kaardii haaraan mana manatti kennamaa jiru akka firii filannootti nuuf haa galu jechuudhaan leenjii kennaa jiraachuun ifatti saaxilame. Taajjabdootni KFO illee yeroo ammaa kanatti mana hidhaatti guurramaa jiraachuunis ibsame. Sababa kanaan walqabatee ummatni mootummaan wayyaanee shira hamaa nurratti xaxaa waan jiruu fi sagalee keenya humnaan saamuuf waan qophaa’eef fincila amma eegalle irraa duuba hin deebinu, kan sodaatanis du’a, sodaannees mana ofiitti du’aa jirra, mootummaan afaan qawweetiin sagalee keenya hin saamu jechuudhaan FDG finiinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf murannoon kan ka’anii fi duubatti kan hin deebine ta’uu ifatti ibsataniiru!